बुबा म आँखा देख्छु होला नि है, कस्तो छ बुबा बाहिरको संसार ? यस्तो छ उनको आखा रसाउने जिबन कहानी – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/बुबा म आँखा देख्छु होला नि है, कस्तो छ बुबा बाहिरको संसार ? यस्तो छ उनको आखा रसाउने जिबन कहानी
रिदम सिंह, बझाङ । बझाङको साईपाल गाउँपालिका वडा नम्बर ४ की पिउलीकुमारी रोकाया अहिले १४ बर्षमा टे,किन । उनी एक बर्षको हुँदा सम्म आँखा देख्थिन । दुई बर्ष पूरा हुन केही दिन बाँकी हुँदा उनी झा,डापखालाले थला परिन ।
नजिकै स्वास्थ्य चौकी समेत नभएको र घरको आर्थिक अवस्था समेत निकै ना,जुक भएका कारण उनका अभिभावकले उनको उपचार गर्न सकेनन् । करिब २ महिना सम्म उनी थ,लापरिन् ।
उनका उभिभावकहरुले छोरी बाँ,च्दैन भन्दै आ,श समेत का,टी सकेका थिए । धन्न जे,नतेन उनी बाँचिन् । उनलाई राम्रो भयो तर पछि गएर आँखा देख्न नसक्ने भईन् । छोरी आँखा देख्न नसक्ने भएपछि कसैले र,तन्धो लागेको र कसैले देवी देउता लागेर यस्तो भएको भन्दै कुराहरु का,ट्न थाले ।
उनका परिवारका सदस्य पनि धामीझाँ,क्री तर्फ नै बढी लागे । त्यो उनको परिवारको बाध्यता थियो । घर छोडेर बाहिर नि,ष्कन र छोरीको उपचार गराउनका लागि आर्थिक अवस्था समेत थिएन ।
गाँउले तथा छिमेकीको घरमा काम गरेर छोराछोरी र आफ्नो परिवारको पेट पा,ल्नु पर्ने बाध्यता उनको परिवारको थियो । जसका कारणले उनको उपचार गराउन सम्भव भएन र अहिले सम्म अ,न्धकारमय जीवन वितानु पर्यो पिउलीले ।
गाउँपालिकाले २५ हजार सहयोग समेत गरेको रोकायाले बताए । सहयोग पछि पिउलीको दुबै आँखाको शल्यक्रिया २०७५ पुष महिनामा गरिएको हो । एक महिनापछि डाक्टरले फेरी चेकजाँच गर्न गे,टा आँखा अस्पताल कैलालीमा अनिवार्य आउनु भनेको थियो ।
गाउँमा माघ महिनामा बाक्लो हिउपात भयो । आफुसंग टिकट काट्न समेत पैशा नभएका कारण छोरीलाई लिएर उपचार गर्न जान नसकेको पिउलीका पिता गंगारामले बताए । अहिले गाँउकै युवाहरु मिलेर सदरमुकाम चैनपुरमा चन्दा सं,कलन गर्दै आएका छन् ।
रोकायाले त्यही चन्दा संकलन गरेको रकममा आश गर्दै सोही रकम लिएर छोरीको उपचार गराउन जाने सोच बनाएको बताए । छोरीले बुबा म आँखा देख्छु होला नि है ? कस्तो छ बुबा बाहिरको संसार, अनि आमा, बुबा, दाजुभाई दिदी बहिनीको अनुहार कस्तो छ ? भनेर सोध्ने गरेका पनि गंगाराम बताउछन् ।
सबै भन्दा बढी गाँउपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर धामीले ब्यक्तिगत दश हजार सहयोग गर्नु भएको छ । संकलन भएको रकम पनि अभाव हुने भएका कारण छोरीको उपचारमा बा,धा पुग्ने भन्दै गंगारामले सम्पूर्ण सहयोगी मनहरुलाई सहयोगको अपिल समेत गरेका छन्
बाँसको भाटाले हानेर टाउको फुटाइएका शिवचन्द्र र उनकी पत्निलाई हमला गर्ने छुटे